१० सेकेन्डमा क्यान्सर पत्ता लगाउन सक्ने एउटा सानो 'कलम' - Himalayan Kangaroo
१० सेकेन्डमा क्यान्सर पत्ता लगाउन सक्ने एउटा सानो ‘कलम’
Posted by Himalayan Kangaroo | २२ भाद्र २०७४, बिहीबार ०४:२६ |
एजेन्सी । क्यान्सरको नाम सुन्दैमा धेरैको सातो उड्छ । यो रोग यति खतरानाक छ कि जसले जीवनभर मानिसलार्इ पीडा दिइरहन्छ । तर, एउटा खुसीको कुरा पनि वैज्ञानिकले ल्याएका छन्, अब खतरनाक मानिने क्यान्सरका लक्षणलार्इ एउटा सानो कलमले केबल १० सेकेन्डमै पहिचान गर्न सक्ने भएको छ । यो सुनेर तपार्इँ पनि चकित पर्न सक्नुहुन्छ ।
अमेरिकाको टेक्सस युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकका अनुसार उनीहरूले हातमा अट्ने एउटा यस्तो डिभाइस बनाएका छन् जसबाट सजिलैसँग १० सेकेन्डमै क्यान्सरको जीवाणु भेट्टाउने क्षमता राख्छ । यस कलमबाट क्यान्सरको उपचार तीब्र गति र राम्रो ढंगले गर्न सकिन्छ ।
साइन्स ट्रान्स्लेशनल मेडिसिनमा प्रकाशित रिपोर्टमा यस डिभाइसबाट गरिएको क्यानसरको परीक्षण ९६ प्रतिशतसम्म सही भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यो कलमले कसरी काम गर्छ ?
यस कलमलार्इ क्यानसर हुने शरीरका सम्भावित अङ्ग नजिकै राखिन्छ, त्यसक्रममा यो कलमबाट पानीको सानो थोपा निस्किन्छ । त्यसपछि जीवित कोशिकाकोके भित्र रहेको रसायन पानीको त्यो थोपातर्फ जान थाल्छन्, जसलार्इ त्यही कलमले आफूभित्र सोसेर लिन्छ । यस कलमलार्इ स्पेट्रोमिटरसँग जोडिएको छ। यो स्पेट्रोमिटर प्रत्येक सेकेन्डमा हजारौँ रसायनको द्रव्यमान मापन गर्न सक्षम छ ।
यस कलमको सहयोगबाट एक प्रकारको रसायनिक फिङ्गरप्रिन्ट तयार हुने गरेको छ। जुनबाट डाक्टरले टिस्युमा क्यान्सर रहेको या नरहेको सजिलै पहिचान गर्न सक्छन् । डाक्टरका लागि एक सामान्य र क्यान्सर भएको टिस्युमा अन्तर छुट्याउन सदैव ठुलो चुनौती बन्ने गरेको छ । यस कलमको मद्दतबाट यो काम धेरै हदसम्म सहज हुनेछ ।
लिविया एबरलिन टेक्सस युनिभर्सिटीमा रसायन विज्ञानका सहायक प्राध्यापक रहेकी छन् । लिविया भन्छिन्, ‘यस डिभाइसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको सजिलैसँग क्यान्सर टिस्युो पहिचान गर्न सक्छ । यसलार्इ प्रयोग गर्न पनि धेरै सजिलो छ ।’
यस प्रविधिको परीक्षण २५३ वटा स्याम्पलमा गरिएको छ। यस डिभाइसलार्इ अबको एक वर्षपछि व्यसायिकरूपमा प्रयोगमाा ल्याउने तयारी डाक्टरहरूले गरेका छन्। त्यसभन्दा अघिलार्इ विभिन्न ढंगबाट परीक्षण गर्ने क्रम जारी छ ।
अहिले भने यसले केबल १.५ मिलिमिटरसम्मको क्यान्सरको टिस्यु पहिचाना गर्ने क्षमता राख्छ । तर शोधकर्ताहरूले अनुसार अहिले पनि यस कलमलार्इ अझै उत्कृष्ट बनाउने काममा लागेका छन् । डाक्टरहरूले ०.६ मिलिमीटरसम्मको सानो टिस्यु पहिचान गर्न सक्ने गरी यसको विकास गरिरहेका छन् ।
त्यसो त यो कलमको मूल्य पनि धेरै सस्तो रहेको छ । तर यसमा लगाउने स्पेकट्रोमिटर धेरै महंगो छ । डा. एबरलिनले पनि यो कुरा स्वीकारेकी छन् । ‘यो डिभाइस सफल हुनका लागि स्पेक्ट्रोमिटर मात्रै ढुंगो बनेर बसेको छ । तर पनि हामी अझै सस्तो र सजिलै प्रयोग गर्न सकिने स्पेक्ट्रोमिटर बनाउने कोशिशमा लागिरहेका छौँ ।’
यसभन्दा पहिले धेरै युनिभर्सिटीमा क्यान्सरको उपचारका लागि विभिन्न डिभाइस बनाइएका छन् । लण्डनको इम्पिरियल कलेजमा बनाइएको एउटा छुराले क्यान्सर पहिचान गर्न सहयोग गरेको थियो । उता हावर्ड युनिभर्सिटीको वैज्ञानिकको टिमले ब्रेन क्यान्सर ठीक गर्न लेजर प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ ।
Previous‘६क्का पञ्जा २’ को ट्रेलर सार्वजनिक (प्रोमोसहित)
Nextआँधीका कारण क्यारिबियन क्षेत्रमा ठूलो क्षति